Izimpawu lemikhiqizo odumile izingubo nezicathulo. izinkampani Izimpawu elaziwayo
Ilogo, eqinisweni, yilokho kuvumelana kwetinhlavu inkampani. Khumbula nemengamo yegolide Macdonald noma uphawu Nike - lezi amalogo umxhwele lemikhiqizo abadumile baye baqaphela zibuswe yayo umbuso ezimbili ezinkulu. Nokho, izinkampani eziningi siqhubeke skimp on ukuthuthukisa le ngxenye ayisihluthulelo ekwakheni enhle yebhizinisi. logo Good ekhumbulekayo kakhulu kwandisa ukukhula futhi kwamakhasimende ukwethembeka, kudala umbono ofanele ku nabo ebhizinisini, kudala ungubani yenkampani.
Kukhona 3 izinhlobo amalogo:
izakhi okuphindaphindayo unomphela. Ngokwesibonelo, amandla eyisisekelo IBM logo, Microsoft, futhi Sony ukudala izakhi ezedlulayo elenza izinhlamvu amafemu ehlukile.
Kukhona amalogo ukuthi ngokoqobo kubonisa kwenza noma enikeziwe yinkampani, isibonelo, Umdwebo indlu ngokuvamile sisetshenziswa logo emabhulashini ingcaca noma upende.
Ukusebenzisa abstract izimpawu ingcaca. Izibonelo zibandakanya inkampani Nike. Ngokuhamba kwesikhathi, uphawu isithombe abasebenzisa isikhumbuzi yenkampani kunoma isiphi isimo.
Cabanga amalogo ethandwa kakhulu lemikhiqizo odumile izingubo nezicathulo.
Ilogo abadumile inkampani ethulwa weswushi brand ethandwa umkhaza, olukukhombayo ephikweni unkulunkulukazi ngesiGreki Victoria (igama Victoria lesiGreki lisho "ukunqoba"). logo iphrojekthi wethulwa 1971 by Carolyn Davidson, umklami graphic, isitshudeni sase-University of Oregon. Caroline wasikisela ukuthi okusalungiswa filipp Nayt, omunye wabasunguli be-inkampani. Knight ayizange ikakhulukazi like ohlongozwayo Caroline kukho, kodwa wayeqiniseka ukuthi esikhathini esizayo logo sizosebenza kuye. Futhi, njengoba sibona, wayengenzi iphutha izibalo. Kamuva, lapho brand Nike wasukuma ukuze eziphakeme zomhlaba wonke, uFiliphu Davidson okwethulwa ukubonga diamond ring nge logo weswushi kanye nenamba enkulu yezemidlalo izingubo nezicathulo kusuka Warehouse yenkampani.
Brand Adidas yasungulwa ngo Adolf Dassler ngemva kokuwa inkampani kayise, okwakubizwa ngokuthi i Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Ekuqaleni, igama yenkampani linjengezwi Addas - esithi ka izinhlamvu zokuqala umsunguli inkampani. Nokho, ezinyangeni ezimbalwa kamuva Addas lashintsha laba Adidas (isidlaliso umsunguli sika phakathi abangane bakhe Adi).
Onophawu amaviyo amathathu kuboniswe logo bathengwa inkampani ezemidlalo Finnish Karhu ngo-1950, futhi namuhla isitayela inkampani, oyingxenye ye-logo ethandwa kakhulu lemikhiqizo abadumile. By the way, band kwakufanekisela ukuthandwa inkampani emazwekazini amathathu.
Rudolf Dassler, umfowabo Adolf Dassler yena, eyasungulwa Puma brand. I inguqulo yokuqala logo yenkampani lihlukile esikwaziyo manje - yokuqala igama lebhizinisi linjengezwi «Ruda» (egameni umsunguli Rudolf, Rudoo). Ngokusho kwenye inguqulo, inguqulo yokuqala logo kwadalwa Rudolph, futhi 60s kwekhulu lama-20. uphawu usezuze yonke izinhlaka zezinkulumo ajwayelekile we Cougars.
Inkampani Gucci - brainchild of Guchchio Guchchi, ababeka umsuka sha manje edumile ngo-1921 e-Florence. Enye yezingane zakhe eziyisithupha futhi kwaba unjiniyela logo abadumile ngo-1933. Namuhla Gucci uphawu nge ingxenye Chic uphawu lemikhiqizo odumile izingubo nezicathulo, njengoba ingenye yezindawo zokuqala ku ukuqashelwa.
I engavamile we uhlamvu babe agqagqene izinhlamvu G. Nokho, akuyona kuphela incwadi, iwuphawu stirrups ezimbili - sha ifa Guchchio Guchchi, eyayidayisa izesekeli amahhashi.
Givenchy - fashion brand, okuyinto yasungulwa ngo 1952 by Yuber Dzheyms Marcel Taffin de Givenchy. Namuhla, le nkampani ikhiqiza amakha, izingubo nezinto zokuhloba. Izimpawu lemikhiqizo abadumile, kulekelelwa uphawu ezidumile indlu fashion.
Ilogo design ulula kodwa ezikhangayo futhi othakazelisayo ngesikhathi esifanayo. Kuyinto 'G' ezine, bangazihluphi yonke indawo. Givenchy logo ukhumbuza imigexo ezihlotshisiwe Celtic.
Inkampani Levi Strauss & Co. (LS & CO) yasungulwa ngo 1853, ngesikhathi lapho Levi Strauss lisuswe kusuka Franconia eSan Francisco ukukhuthaza athole izinto zokuthunga ibhizinisi legatsha kubafowabo ogwini olusentshonalanga. Kakade ngo-1870 inkampani umkhankaso ukudayiswa omkhulu jini ovaloli, okuyinto abahlakazekile ngempumelelo phakathi abathengi.
Kuyaphawuleka ukuthi jeans ifomu, okuyinto umuntu wanamuhla eyaziwa emgwaqweni, kwaqala ukwenziwa kuphela ngemva 1920. Kuyaphawuleka ukuthi logo yenkampani okwangempela kuvele ngo-1886 futhi kuyinto amahhashi amabili edwengula jeans eendaweni ezihlukahlukeneko. Izimpawu elaziwayo izingubo brand, umlando yokudalwa, njengoba umthetho, kukhona igcwele-legends. Ngakho, ukubukeka LS & CO logo kwandulelwe ukugunyazwa okwenziwe indaba, owawungumnyaka kube inkomba yokuthi ikhwalithi yomkhiqizo: umshayeli iboshelwe ezimbili jeans disparate imoto waxosha kanjalo esiteshini uya khona.
Le nkampani yasungulwa ngo-England ngo-1895, i-Foster nemadvodzana akhe isifiso umsunguli ukuze lelisu namadodana akhe amateki spikes. Ngemva anyuke Olympus abakhiqizi emhlabeni ngo-1958 umsunguli abazukulu, uJoe Jeff, uqambe kabusha inkampani Reebok. Igama libhekisela ezwekazini lase-Afrika, lapho «rhebok» - uhlobo wezinyamazane. Izimpawu lemikhiqizo abadumile Reebok futhi Adidas ngabakaFaro ikhaya imfashini olulodwa - Reebok kuyinto ephethwe Adidas kusukela ngo-2005.
Fashion endlini Louis Vuitton wavula ngo-1854, ngemva kwalokho umhlaba wonke ukwazi izimpahla eliphezulu kakhulu futhi Chic. inkampani logo emelelwa zamagama sha futhi wadala eliqoshiwe, liphefumulelwe Japanese Motifs ezimibalabala.
Sam uhlamvu yasungulwa futhi wethulwa emphakathini ngo-1974 ngu-Shintaro Tsuji, umnikazi wenkampani Sanrio. Njengoba liye bhalisiwe njengoba inkampani ukuhweba logo isithombe Cute Kitty ngo-1976.
Ekuqaleni, amagama amabili akhona, phakathi lapho bekuwukukhetha: Hello Kitty futhi Kitty White. Zonke igama elifanayo lokuqala kwenzakala kukhanga kakhulu, futhi uhlamvu isibe isithombe ezigidi izingane nabazali bazo emhlabeni wonke. Izimpawu elaziwayo izinkampani kanye brand of zokugqoka zezingane namathoyizi, ngaphambili nihlakazeke, esenze intuthuko olulodwa ezinkulu emkhakheni ibhizinisi.
Umlando, kanye logo yayo, sihlehlela emuva 1908 futhi ubizwa ngokuthi Xoxa Rubber Shoe Inkampani. Ngo-1915, umsunguli Mills Xoxa waqala ngokwenza ithenisi izicathulo, kodwa kubaluleke kakhulu umcimbi yenkampani kwenzeka ngo-1917: umdlali basketball Charles H. Taylor Mills engena ehhovisi nge unyawo olimele. Ukuze iwenze ube lula ukuhamba athlete, Mills uye wazakhela izicathulo nge umkhawulo okusezingeni eliphezulu engenhla kwazo namuhla baye baba zabuna zezwe izicathulo imfashini.
Xoxa - akuyona nje umkhiqizo, kuba yonke enkathini, isibonelo, kungalesi Uilt izicathulo Chemberlen kukora amaphuzu 100 NBA umdlalo ngo-1962, Maykl Dzhordan wayegqoka Xoxa, lapho beshaya umgomo esiwujuqu ngo-1982. Kwakuwusuku NBA izicathulo esemthethweni isikhathi eside, esigqokwa lezi zinganekwane lo mdlalo njengoba Medzhik Dzhonson, Larry Bird futhi Dzhulius Irving.
Kusukela 2012, umnikazi sha kwaba nkampani okungenani ethandwa Nike.
Omunye imikhiqizo endala futhi ohlonishwa kakhulu, ogama logo lwengwenya oluhlaza, laziwe kubo bonke ngubani okungenani kanye nesithakazelo ezisezweni fashion. Ngo-1933, uJean Rene Lacoste eyasungulwa inkampani kukhiqizwa ithenisi shirts, futhi kwamiswa igama kusukela sifanangwaca nemidlalo mbumbulu we umsunguli, kwakuzwakala sengathi "ingwenya isikhumba".
Uphawu Rene Lacoste wazalwa, kanye nezinye amalogo eziningi lemikhiqizo abadumile. Worth ke kulesi simo. Umlando uphawu simiswe ngalendlela lelandzelako: umngane Rene wahosha ingwenya encane nje for fun, kodwa ngokushesha waba logo brand sika, okuyinto manje laziwe kubo bonke.
Ilogo yenkampani ngokuvamile liqhathaniswe iphazili: lemicabango sishukunyiswe isihlobo ezimbili okuhlanekezelwe kwezinye incwadi ngayinye F. umsunguli we sha - umklami ethandwa Karl Lagerfeld, owasungula i-logo indlu fashion kombhangqwana Edward Adele Fendi. uphawu liyabonakala yendlu imfashini manje anesithombe ku idokhumenti ngayinye, esisayinwe abameleli Fendi njengendlela fashion ukuphrinta Fendi colletions.
I-logo abadumile ngesimo "C" kabili kuyendlulela nomunye futhi wahlela "emuva kuya emuva", yanyatheliswa okokuqala ezisezweni fashion ngo-1925 kwi ibhodlela Chanel inombolo 5 amakha.
Izimpawu brand eyaziwa kakhulu ngokuvamile kufanele izindaba eziningana yokudalwa, njengoba kwenzeka lokho kwabase-brand Chanel. Enye inguqulo indaba Mikhail Vrubel, ngubani ngo-1886 ngesineke sehhashi, efana wamanje Chanel-logo. Enye inguqulo ithi okungekho Vrubel akazange iqhaza ukudalwa uhlamvu, kodwa yasetshenziswa nje Horseshoes amabili ewela njengoba iwuphawu impumelelo futhi sikufisela. Nokho Abaklami eziningi zazo zikholelwa ukuthi logo limelela zamagama Koko Shanel - umsunguli we fashion house French.
Novemba 19, 1942 Calvin Klein brand yadalwa, ilogo ye esenziwa litholakale emphakathini kuphela ngemva kweminyaka engu-30. Ilula futhi kalula ekhumbulekayo SC logo liletha izinhlangano of brand, ngakho-ke kwenziwa ephaketheni zonke ibhulukwe. Ngokushesha kwaba uphawu esithandwayo esisetshenziselwa hhayi kuphela yisigcibisholo umenzi, kodwa futhi njengoba isitembu ngalendoda sika.
Uphawu we brand odumile ngokomfanekiso exhumene zamaGreki futhi lubonisa ikhanda okwakuthandelene yenyoka, okuvame kuhlobisa izikhwama logo. brand Akwaziwa ezimbalwa ngempela, kodwa Versace logo kunzima ukudida nomunye ngokuqinile.
Ilogo umklami waqala ngo-1978 Dzhanni Versachi, owayebizwa ngibeleselwa zabuna 'ubhedu kwezobuciko, ngakho version nge le Gorgon Medusa, udonsa izibukeli zibe itshe, ke liye laba uphawu, emelela Luhambo umklami esibulalayo emhlabeni fashion.
Isitayela - black isikibha
Tattoo ku ithole - egqamile futhi engavamile
Ingwenya lesikhumba - okunethezeka bangempela. Indlela ukhethe umkhiqizo eyenziwe ingwenya isikhumba?
Isudi Classic - into Irreplaceable wezigqoko yanoma yimuphi owesifazane
Ukuthenga e Verona: Izitolo, Stores, zezitolo
Inhlasi umdobi - imfanelo ka ezingokomthetho Pope
A iwindi pop-up in the [isuswe]. imibono yakhe kanye umgomo
Indlela uxubha ilondolo, kuyoba usizo ukwazi umnikazi ngamunye
Blender "Philips": amasu esihle kakhulu ekhishini yesimanje
Amplifier Stereo: ezimotweni nge umoya kanye umculo!
Umphindiseli Vision: Biography of umlingisi, umlando ukuvela e franchise "The Avengers"
Helicopter "Robinson": izici, izithombe, isivinini. Flying in a indiza "Robinson"
Basket nge iphephandaba amashubhu, noma kanjani ukwakha isiqeshana stylish ifenisha?